အကူညီပေးရေးအဖွဲ(ဂေဇတ်မိသားစု)့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အကူညီပေးရေးအဖွဲ(ဂေဇတ်မိသားစု) ့
Posted by ေရႊအိမ္စည္ on Aug 25, 2011 in Copy/Paste | 15 comments
ကွန်ပြူတာနဲ ့ပါတ်သတ်ပြီးအခက်ခဲ ဖြစ်နေသူများ..
ပညာတိုးတက်စေရန်အတွက်..ကျနော်..ဒီ အကူညီပေးရေးအဖွဲ ့လေး
တည်နေရာ.…Forum …..Suggestion Box
Have some feedback and input to share? Don’t be shy and drop usanote. We want to hear from you and strive to make our site better and more user friendly for our guests and membersalike
ဝန်ခံချက်..သူကြီးရဲ ့မန္တလေးဂေဇက်တွင် ရှာနည်း ဖတ်နည်း ရေးနည်း
ကိုဖတ်ပြီး…ပြီးပြည့်စုံသော်လည်း အသစ်ဝင်သော လူငယ်များအတွက် လိုအပ်ချက်ရှိနိုင်သေးတဲ ့အတွက်
အရင်၅နှစ်လောက်က ရေးထားတဲ့.. M$ Access database , asp လည်ပတ်နေပြီးသော စံနစ်တခုကို.. စံနစ်သစ် aspx နှင့် ပြောင်းလို (upgrade) လုပ်လိုပါသည်။
အဲဒါ.. လုပ်ပေးနိုင်သူများ ရှိမလားလို့..။
project သိပ်အကြီးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး..။ ဆိုတော့..M$ SQL တို့ဘာတို့.. ကျွမ်းကျင်ရင်ရမယ်ထင်တာပဲ..။
DBက အရင်AccessDatabaseမသုံးတော့ဘဲ MiscrosoftSQLပြောင်းသုံးချင်တာလား
Classic asp ဖြစ်နေတာကို asp.Net နဲ့ မြှင့်ပေးဖို့ပါ…။
MS SQL မဟုတ်လည်း ရပါတယ်…။
အသေးစိတ်သိချင်ရင်.. အီးမေလ်းနဲ့မေးပါနော..။ kai(at)myanmargazette.net
တော်သေးတာပါ … kai (egg) မဟုတ်ပေလို့သာပဲ
ကျွန်တော့်ရဲ ့ကွန်ပြူတာနဲ ့ပါတ်သက်တဲ့အခက်အခဲကတော့ ကွန်ပြူတာ ဝယ်ဖို ့ပိုက်ပိုက် မလောက်လို ့ပါဘဲ..
ရင်းဂစ် ငါးထောင်လောက် အကူအညီပေးပါလားဟင်…
ကွန်ပြူတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာသည် စာလုံးအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ သဂျီးပြောတဲ့အရာတွေကို လုပ်ပေးချင်ပေမယ့် Access database တို့ SQL တို့ ရတော့ရပေမယ့် ခု နည်းနည်းမေ့နေလို့ပါရှင်…
ကွန်ပျူတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကွန်ပြူတာပဲဖြစ်ဖြစ် မှန်တယ်လို့ ထင်တာပဲ .. သူက အင်္ဂလိပ်စာလုံးအတိုင်း အသံထွက်ရေးထားတာမို့… မြန်မာစာ သတ်ပုံက ပေါက်ဖွားလာတာမဟုတ်တော့ … အသံထွက်ကို အဆင်ပြေသလိုရေးလို့ ရတယ် မှတ်တယ် … ။
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်ကိုတော့… ယက်ပင်းနဲ့ သုံးပါသတဲ့ … ။
သူကြီးရေ တယောက်ကမှ မကူညီကြသေးပါလား။သူကြီးက ပွိုင့်တွေနှုတ်ထားတော့သိပ်မကြည်ကြတော့ဘူးများလား။ရွှေအိမ်စည်ကိုဘဲအားကိုးတော့မယ်။မေးစရာရှိရင်မေးပေါ့မယ်နော့
အရင်က မရွှေ ရွာပြင်ရွာပြင်နဲ့ ဘာကိုဆိုမှန်းမသိဘူး။ အခုမှသိတယ် ဖိုရမ်ကို ပြောတာကိုး….ထူးဆန်းပါ့ ကတွတ်ပီ…။
ဒါဆို ဦးကြောင်းကြီး ခေတ်နောက်ကျသွားပြီ
ကိုကြောင်ကြီးလည်လှပြီ ထင်တာ ခုတော့ ရွာထဲမှာပဲ သူငယ်နာနှပ်စားလေး ဖြစ်နေပါပေါ့လား။ သူနည်းနည်းလေး သိရင် သိတယ် သိတယ် အော်နေတာ( eg- သဂျီးအကြောင်း)၊ ရွာပြင် ရွာပြင်လို့ပြောတာကို မသိတော့ ငြိမ်ငြိမ်လေး နေတယ်။ ခုမှပဲ ပေါ်တော့တယ်။
ညီမရေ computer ကို အများကြီးလည်းမသုံးတတ်တော့ အကူအညီ လည်းတောင်းတတ်ဘူးကွယ်။ လောလောဆယ် အမ ဒီမှာ logged in name လေးပြောင်းချင်လို့ဘယ်လိုုလုပ်ရမလဲ။ (ပိန်းတယ်ပြောလည်းခံပါ့မယ်။) အမစဝင်ကတည်းက နာမည်တူရှိတယ်ပြောကြလို့ စိတ်မလုံဘူးဖြစ်နေတယ်။
Can you say me where can I get
the portable folder protector ( pass word ) software or
the portable folder hide software ?
Which one is good to use ?